Vaovao - Ny mahasamihafa ny mpankafy AC sy ny mpankafy DC
Ny mahasamihafa ny mpankafy AC sy ny mpankafy DC
1. Fitsipika miasa:
Ny fitsipika iasan'ny mpankafy DC: amin'ny alàlan'ny alàlan'ny herinaratra DC sy ny fampidirana electromagnetic, ny angovo herinaratra dia navadika ho lasa milina handroahana ny fihodinan'ny lelany. Ny coil sy IC dia avadika tsy tapaka, ary ny peratra magnetika fampidirana dia mitondra ny fihodinan'ny lelany.
Ny fitsipiky ny fiasan'ny mpankafy AC: mitondra loharanon-kery AC izy io, ary hifandimby eo anelanelan'ny tsara sy ny ratsy ny herinaratra. Tsy miankina amin'ny fanaraha-maso ny fizaran-tany hamokatra sahan'andriamby. Raikitra ny fahita matetika amin'ny famatsiana herinaratra, ary ny hafainganan'ny fiovan'ny andry andriamby ateraky ny ravin'ny vy silikônina dia voafaritra amin'ny alàlan'ny famerenan'ny herinaratra. Ny haavon'ny halavany, ny hafainganan'ny hafainganam-pandehan'ilay sahan'andriamby, ary ny hafainganan'ny hafainganam-pandehan'ny teôria. Na izany aza, ny fahita matetika dia tsy tokony ho haingana loatra, haingana loatra dia hiteraka fahasarotana amin'ny fanombohana.
2. firafitry ny firafitra:
Ny rotor an'ny mpankafy DC dia misy ny kofehin'ny mpankafy DC, izay loharanon'ny fikorianan'ny rivotra, ny axis mpankafy, ary ampiasaina hanohanana ny fihodinan'ny lelan-tsofina mifandanja, ny peratra magnetika rotor, andriamby maharitra, ary mampiroborobo ny lakilen'ny haingam-pandeha mifindrafindra, ny peratra peratra magnetika, peratra magnetika miorina. Ho fanampin'izany, misy koa loharano manohana. Amin'ny alàlan'ireo faritra ireo, ny ampahany manontolo sy ny ampahany amin'ny motera dia raikitra ho an'ny fihodinan'ny tuberculosis. Ny fitarihan'ny fihodinana dia vokarina, ary ny hafainganam-pandehan'ny fihodinana dia lehibe. Ny hafainganam-pandehany mifehy ny fahombiazany dia tsara, ary ny fanaraha-maso dia tsotra.
Ny firafitra anatiny an'ny mpankafy AC (dingana tokana) dia misy fiolahana coil roa, ny iray dia ny fihodinan'ny fanombohana, ireo fiolahana roa ireo dia mifamatotra amin'ny andiany tsirairay avy, ka mamorona teboka telo, ny teboka andiany no faran'ny iraisana, ary ny fiaingana mihodinkodina dia ny fiandohan'ny famaranana ny fiafaran'ny fiolahana dia ny fiafarana mihazakazaka. Ankoatr'izay dia ilaina ny capacitor fanombohana. Ny fahaiza-manao dia matetika eo anelanelan'ny 12uf ary ny mahazaka herinaratra dia matetika 250v. Misy mpampitohy roa. Ny tendrony iray dia mifamatotra amin'ny faran'ny fihodinan'ny fanombohana ary ny iray hafa dia mifandray amin'ny faran'ny fihodinana mihazakazaka mba hamorona telozoro. Ny herinaratra (tsy mila manavaka ny tsipika mivantana sy ny tsipika tsy miandany) dia mifandray amin'ny faran'ny fihodinana mihodina (izany hoe mifamatotra amin'ny faran'ny capacitor koa), ary ny iray kosa mifandray amin'ny tendrony iraisana , ary ny tariby mandeha amin'ny tany dia mifandray amin'ny akorandriaka.
3. Toetra mampiavaka ny fitaovana:
Fitaovana fanamafisana DC: vita amin'ny alikaola izy io, ary ny androm-piainana dia azo ampiasaina tsy tapaka mandritra ny 50 000 ora. Ny firafitra anatiny ao amin'ny DC dia misy tabilao fanodinana sy fanaraha-maso lehibe (ao anatin'izany ny fantsom-piovan'ny fiovan'ny fahita matetika, ny sivana fanamafisam-peo, ny faritra fanamafisam-peo, sns.), Izay tsy hisy fiantraikany amin'ny fiovan'ny herinaratra. Androm-piainana maharitra.
Ny firafitra anatiny an'ny mpankafy AC dia mpanova indrindra. Ny ankamaroan'ny fitaovana ampiasaina amin'ny mpankafy AC dia vita amin'ny fanjaitra ao an-trano, fanjaitra tungsten matetika na fitaovana vy tsy misy fangarony. Raha miovaova be ny herinaratra dia hisy fiatraikany amin'ny androm-piainan'ilay mpanova.
Hvac Fan Puller, 12cm Ac Axial Fan, Metal Grill Fan 80mm Guard, 172mm Ac Axial Fan, Metal Fan Guard, Guard Fan Plastika,